EGO NA-EGO. Gịnị bụ Leverage Staking ? | by Emmanuel Ramsey | Medium
Gịnị bụ Leverage Staking ?
Na Leverage Staking, onye ọrụ nnyefe rTokens ịgbazinye Native Tokens site na usoro ịgbazinye ego, wee kwupụta Native Tokens site na StaFi roToken Ngwa ime ihe ahụ ugboro abụọ. Nke a na-arụpụta nke ọma n’ịba ụba ụgwọ ọrụ.
Ka anyị were usoro ịgbazinye Liqee dị ka ndị na-akwụ ụgwọ iji nye gị nkọwa doro anya:
1) Alice na-eche 10 ATOMs site na StaFi rATOM App, ọ na — enweta 10 rATOM Tokens (na — eche na ọnụego mgbanwe bụ 1: 1 mgbe ahụ), yana otu kwekọrọ na APY nke 8.08%. RATOM Tokens bụ onye ejikọtara ya na isi 10 ATOM nke Alice debere, ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ kwa afọ na 8.08%.
2) Ọ bụrụ na Alice chọrọ ịbawanye otu APY na otu ATOM 10, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ 10 rATOM na Liqee ma gbazinye ego nke ATOM, sịnụ, 5 ATOM tokens. Ihe ize ndụ nke mmiri ahụ dị ala nke ukwuu ebe ọ bụ na uru nke RATOM Tokens ga-abawanye ka a na-enweta ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbe niile, nke na-eme ka LTV nwee ahụike.
3) Alice nwere ike weghachite ATOM ise o gbazinyere site na StaFi rATOM App ọzọ. N’ụzọ dị otu a, Alice na-eji 10 ATOMs iji nweta ụgwọ ọrụ siri ike nke 15 ATOMs.
N’ezie, n’usoro a, Alice kwesịrị ịkwụ ọmụrụ nwa maka ATOM 5 ọ gbazinyere, mana mgbe ọmụrụ nwa ahụ dị ala karịa 8.08%, a na-ekwe nkwa inye Staking ga-eweta usoro ogologo oge kwụsiri ike na oke nke mkpụrụ osisi. ndị na-eme achịcha dị ka Alice.
Model Staking Profate Model
Ka anyị chetaghachi ihe atụ a dị n’elu. N’iche na ATOM nke mbụ Alice bụ M, RATOM / NATOM Exchange na StaFi rATOM App bụ R, na ATOM staking APY bụ X, mgbe ahụ ego nke rATOM nke enwere ike inweta bụ M / N
Were LTV okpu nke rATOM na Liqee bụ β, ọmụrụ nwa ATOM bụ Y
N’ụdị atụ a, mgbe Alice chọpụtara na X karịrị Y, Leverage Staking bara uru, yana uru dị na Staking Leverage bụ ndị a:
1.Calculating ego enwetara mgbe edobere isi M na StaFi rATOM App: M * X
2. Oke ego net nke Re-Sting the ATOM enwetara site na itinye ego rATOM n’ime Liqee: M / R * β * (X-Y)
3. Oke ego net nke Re-Sting na-akpata ego nke ugboro atọ: M / R * β / R * β * (X-Y)
4.The okirikiri na-aga n’ihu
Nzọụkwụ N, ego kachasị net nke rATOM nke enwetara site na nkwa RATOM App maka oge Nth: M * (X-Y) * (β / R) ^ N
Yabụ, mgbe Alice kwụrụ ọtọ maka oge nke usoro a, na-enweghị ịtụle ọnụahịa gas ya, ngụkọta ego a na-enweta na ntanetị (LSR) bụ:
Usoro dị elu abụghị naanị rATOM, kamakwa akụ ndị ọzọ ejiri mara. Ọ na — enyere ndị ọrụ aka ịghọta isi ihe na — emetụta Model Leveraged Staking Profate Model. Na usoro, a na-edobe ọnụọgụ mgbazinye ego kachasị site na ikpo okwu ịgbazinye ego ma ọ dị obere karịa 1.
Yabụ, na-eche na ọnụego mgbanwe R nke ụfọdụ rToken na-akwụsi ike n’oge dị mkpirikpi, n’ọnọdụ dị oke njọ, Ha nwere ike were njedebe ahụ ka N na-aga enweghi oke. Mkpokọta LSR na APY nke LSR nke Alice nwere ike inweta mgbe oge ngwụcha ngwụcha ngwụcha bụ:
Ọ dị mma ịmara na mkpụrụ osisi rokoken ahụ na-akpata X na ọmụrụ nwa Y nke Native Token na usoro ịgbazinye ego nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga.
Ezigbo Ego Ego
Ka ọ dị ugbu a (12PM UTC, Sept 3, 2021), StaFi rATOM App’s Staking Reward APY bụ 8.08%. Nke ahụ bụ, X = 8.08%; ọnụego mgbanwe ugbu a R nke rATOM / NATOM bụ 1.025715; na Liqee’s rATOM kachasị gbaziri ọnụọgụ β bụ 65%.
Mara na enyere uru dị n’elu na-eche na okirikiri ahụ na-aga n’ihu, nke bụ ezigbo ọnọdụ. N’ọnọdụ dị mma, ka ukwuu ezigbo ọmụrụ nwa dị n’etiti APY X na-akpata esemokwu na akara aka nwa na-agbazinye APY Y n’elu usoro ịgbazinye ego, ka ukwuu uru LSR APY.
N’iche na APY nke ihe aka ala n’elu usoro ịgbazinye ego bụ 0, ọnụọgụ LSR kachasị nke Alice nwere ike inweta site na ịgbatị okirikiri ga-abụ 273% nke Staking APR
Mgbe ọmụrụ nwa nke ịgbazinye ego na-amalite ịrị elu, LSR APY ga-agbada dị ka o siri dị, mana ọ bụrụhaala na ọmụrụ nwa ọmụrụ nwa (X-Y) karịrị 3%, LSR APY nwere ike ịbụ nke okpukpu abụọ. Nke a na-egosi na achịcha achịcha, nke na-ejikọ ọnụ ọnụ StaFi na ebe a na-agbazinye ego, nwere ike ịmepụta nkwụsi ike, ogologo oge, nkwụghachi d-elu maka ndị na-akwụ ụgwọ.
Ihe ọzọ bụ, StaFi na Liqee ewepụtala atụmatụ enyemaka dị ukwuu maka ndị ọrụ Staking Leveraged. Ewezuga ụgwọ ọrụ siri ike, ndị na-eme mkpọtụ nwekwara ike imeri FIS, LQE, na DF token airddrops.
Maka nkọwa, pịa ebe a.
StaFi bụ usoro izizi nke DeFi na-emeghe oghere nke akụ ndị siri ike. Ndị ọrụ nwere ike itinye ihe nrịba ama PoS site na StaFi ma nata rTokens na nloghachi, nke dị maka azụmaahịa, ebe ha ka na-enweta ụgwọ ọrụ siri ike. roToken bụ usoro sitere na staFi nyere ndị ọrụ mgbe ndị ọrụ jiri PoS tokens gafee StaFi rToken App. A na-egbochi ndị mmadụ ihe ngosi PoS na ihe nrịba ama ndị ọrụ na ụgwọ ọrụ kwekọrọ na ya. Enwere ike ịnyefe rTokens ma zụọ ahịa n’oge ọ bụla.